Uthisha akababoni beyiziboshwa abafundi | Isolezwe
Uthisha akababoni beyiziboshwa abafundi
intandokazi / 10 January 2019, 12:29pm / PHILI MJOLI
UNKK Thuli Mazibuko ongomunye wothisha esikhungweni sezemfundo sasejele eWestville i-Usethubeni Youth Centre nothishanhloko walesi sikole uNkk Neli Mkhize ngesikhathi kunomcimbi wokuklonyeliswa kwabafundi abenze kahle ku-matric emajele akuleli kulo leli jele ngoLwesibili
‘ANGITHANDI ukwazi ukuthi umfundi osesikoleni sami udonsa siphi isigwebo, ngifuna ukubabona befana bengabafundi abalangazelele ulwazi.”
Lokhu kushiwo uNkk Neli Mkhize uthishanhloko wesikole sasejele eWestville, i-Usethubeni Youth Centre, ngemuva kokuthi isikole sakhe sichonywe uphaphe lwegwalagwala ngokuthola ama-bachelor pass amaningi ukuzedlula zonke ezinye izikole zasemajele kuleli ebezinabafundi bakwa-matric, emcimbini wokuhlonishwa kwabafundi nothisha abenze kahle ngo-2018, eWestville ngoLwesibili.
Unyaka wesithathu abafundi bakulesi sikole bephasa ngo-100%. Selokhu engenile kulesi sikhundla ngo-2015 abafundi balesi sikhungo abenza * -matric baphasa bonke.
Uthe umgomo wokuqala azibekela wona ukuthi angababuzi abafundi ukuthi badonsa ziphi izigwebo ukuze kungabi khona umfundi azombheka ngendlela ehlukile.
“Ngesikhathi ngithatha umsebenzi wokuba uthishanhloko kulesi sikole ngangazi ukuthi akuwona umsebenzi olula kodwa futhi kunezinselelo, ezinye zazo kunzima ukuzinqoba,” kusho uNkk Mkhize.
Lesi sikole nyakenye besinabafundi abangu-23 ka-matric, abangu-17 bathole ama-bachelor pass abangu-7 bathola ama-diploma.
Uthe ukuthola imiphumela emihle kwalesi sikhungo kulele endleleni ahlela ngayo indlela yokufunda njengoba ethi ngoDisemba ikilasi lika-matric lika-2019 beseliqalile ukufunda. Uthe yize othisha bevule izolo kodwa yena nabanye othisha ababeyiziboshwa kuleli jele bese beqalile ukwendlalela ngokufundisa ngoDisemba.
“Kuthi uma kuvulwa othisha ebebefundisa ngoDisemba banikezele kothisha abasemthethweni basejele okuyibo abazoqhubeka lapho begcine khona. Le ndlela yokufundisa isenza ukuthi sibe nesikhathi esanele sokuzihlela sibone ukuthi kumele siqinise kuphi kusenesikhathi,” kusho yena.
Ngenxa yempumelelo yesikole sakhe uthi kulo nyaka ucelwe ukuthi alekelele ejele iQalakabusha, kuwo lo nyaka leli jele nalo lilale isithathu ngokuthola o-distinction abaningi.
“Zikhona izingqinamba esibhekana nazo, ezinye zazo ziyefana nalezo ezenzeka ezikoleni ezijwayelekile njengokudojwa kwamakilasi. Umfundi akenqeni ukuthi athi uyagula uphethwe yikhanda ngeke akwazi ukungena ekilasini, mina njengothisha kumele ngihlale nginamaphilisi ngimnikeze ngibone ukuthi uzokhala ngani. Abanye abafundi bethu basuke sebelahlwe yimindeni yabo ngenxa yezenzo zabo. Kuba nzima ukuthi ngicele umzali abe yingxenye yokusiza umfundi. Uma kunjalo kumele ngiphume ejele ngiye kwakhe siyoxoxa, ngilokhu ngivakasha izikhawu eziningi ngaphambi kokuthi avume ukuba yingxenye yemfundo yengane yakhe,” kusho uNkk Mkhize.
Uthe okunye okuyingqinamba enkulu ukuthi laba bafundi uma sebephothule * -matric, badinga umuntu ozobabamba ngesandla aye nabo emanyuvesi abeluleke ngempilo yangaphandle abasuke bengasayijwayele.
“Akekho omunye umuntu ongenza lokho ngaphandle kwami, uma umfundi wami emukelwe enyuvesi yaseKapa ngihamba naye ngimcathulise, ngihambe naye iminyaka yonke efunda. Uma eseqedile uyabuya azosiza lapha esikoleni ngesihle, ngigcina sengifana nelungu lomndeni.”